DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA NWANNA DCP-7057R - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Chọọnụ ma budata ọkwọ ụgbọala maka Nwanna DCP-7057R MFP
Ọtụtụ ndị na-atụ egwu na-atụ egwu ịkwaga na ihe nchọgharị ọhụrụ naanị n'ihi na echiche ahụ na ọ dị mkpa iji weghachite ihe nchọgharị ma chekwaa data dị mkpa dị egwu. Otú ọ dị, n'ezie, ntụgharị, dịka ọmụmaatụ, site na ntanetị Google Chrome na Mozilla Firefox dị ngwa - ọ dị mkpa ka ị mara otú e si enyefe ozi na-akpali mmasị. Ya mere, n'okpuru ebe a, anyị ga-eleba anya na e si na Google Chrome gaa Mozilla Firefox.
Ihe ọ bụla onye ọrụ ọ bụla na-eji ihe ngosi Bookmark na nchọgharị Google Chrome, nke na-enye gị ohere ịchekwa ibe weebụ dị mkpa na nke na-adọrọ mmasị maka ịnweta ohere na-esote ha ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ị kpebie ịkwaga na Google Chrome ka Mozilla Firefox, mgbe ahụ, enwere ike ibudata akwụkwọ edokọbara akwalite site na ihe nchọgharị gaa na ọzọ.
Download Mozilla Firefox Nchọgharị
Olee otú mbubata ibe edokọbara si Google Chrome ka Mozilla Firefox?
Nzọụkwụ 1: site na ntinye akwụkwọ ntinye aha
Ụzọ kachasị mfe iji mee ihe ma ọ bụrụ na ị nwere ma Google Chrome na Mozilla Firefox arụnyere na kọmputa ahụ n'otu akaụntụ.
N'okwu a, anyị ga-amalite Mozilla Firefox ihe nchọgharị Ịntanetị ma pịa na ibe edokọbara na mpịakọta nke mpio ahụ, nke dị na nri nke ebe nkesa. Mgbe ndepụta ndị ọzọ gosipụtara na ihuenyo, họrọ ngalaba "Gosi ihe edokọbara niile".
Mgbakwunye window ga-apụta na ihuenyo ahụ, n'elu nke ịchọrọ ịpị bọtịnụ ahụ. "Bubata na Ndabere". Ihuenyo ga-egosipụta nchịkọta nhọrọ ndị ọzọ ịchọrọ ịme nhọrọ nke ihe ahụ "Ịbubata data sitere na ihe nchọgharị ọzọ".
Na window windo, tinye ntụpọ n'akụkụ ebe "Chrome"wee pịa bọtịnụ ahụ "Na-esote".
Jide n'aka na ị nwere nnụnụ na nso ihe ahụ. "Akwụkwọ edokwubara". Lelee igbe nlele ahụ na nso ihe ndị ọzọ dị na uche gị. Dezue ọrụ ịdebanye aha edokọbara site na ịpị bọtịnụ ahụ. "Na-esote".
Usoro 2: Iji HTML Njikwa
Usoro a bara uru ma ọ bụrụ na ịchọrọ ibubata ibe edokọbara site na Google Chrome ka Mozilla Firefox, ma n'otu oge ahụ, a ga-arụnye ihe nchọgharị ndị a na kọmputa dị iche iche.
Nke mbụ, anyị ga-achọ mbudata mbupụ site na Google Chrome ma chekwaa ha dịka faịlụ na kọmputa gị. Iji mee nke a, mepee Chrome, pịa bọtịnụ ihe nchọgharị na aka nri aka nri, wee gaa Bookmarks - Bookmark Manager.
Pịa bọtịnụ dị n'elu windo ahụ. "Management". Mgbakwunye ọzọ ga-apụta na ihuenyo ebe ịchọrọ ịme nhọrọ "Mpempe akwụkwọ Mbupu na Njikwa HTML".
Ihuenyo ahụ ga-egosipụta Windows Explorer, ebe ị ga-achọ ịkọwa ọnọdụ ebe a ga-echekwa faịlụ edokọbara, nakwa, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gbanwee aha faịlụ ọkọlọtọ.
Ugbu a ka mbupụ nke ibe edokọbara ezuola, ọ na-anọgide na iji mezue ọrụ nke anyị site na ịme usoro mbubata na Firefox. Iji mee nke a, mepee Mozilla Firefox, pịa bọtịnụ ibe edokọbara, nke dị n'akụkụ aka nri nke ụlọ ntanetị. Ndepụta ndị ọzọ ga-emeghe na ihuenyo ebe ịkwesịrị ịhọrọ nhọrọ maka ihe ahụ "Gosi ihe edokọbara niile".
N'elu elu nke window windo, pịa bọtịnụ òké. "Bubata na Ndabere". Obere nchịkọta nhọrọ ga-apụta na ihuenyo, nke ị ga-achọ ịhọrọ nhọrọ mpaghara. "Bubata Mbemokwu nke Njikwa HTML".
Ozugbo Windows Explorer gosipụtara na ihuenyo ahụ, họrọ faịlụ HTML na ibe edokọbara sitere na Chrome na ya, site na ịhọrọ nke, niile ibe edokọbara ga-abanye na Firefox.
N'iji usoro ọ bụla a dị n'elu, ị nwere ike ịfefe akwụkwọ edokọbara gị site na Google Chrome ka Mozilla Firefox, na-eme ka usoro ịgbanwe ihe nchọgharị ọhụrụ dị mfe.